Abavelisi be-USB Flash drive ekumgangatho ophezulu abajikelezayo be-usb stick swivel 32gb 64gb 128gb kunye nabathengisi | M-uKumkanikazi
Abenzi beFlash drive yeUSB ekuMgangatho oPhezulu iSwivel usb stick swivel 32gb 64gb 128gb
I-USB 2.0 yeThumb Drayivu yiplagi kwaye idlala ngaphandle kofakelo lwesoftware; Faka ngokulula isithupha ukuqhuba ukuhambisa kunye nokugcina idatha phakathi kwezixhobo. IFold Storage Pen Drive ixhasa iiWindows 7/8/10 / Vista / XP / Unix / 2000 / ME / NT Linux kunye neMac OS, kwaye iyahambelana ne-USB 2.0 kunye ne-USB 1.1.
• I-USB 2.0 yeThumb Drayivu yiplagi kwaye idlala ngaphandle kofakelo lwesoftware; Faka ngokulula isithupha ukuqhuba ukuhambisa kunye nokugcina idatha phakathi kwezixhobo. IFold Storage Pen Drive ixhasa iiWindows 7/8/10 / Vista / XP / Unix / 2000 / ME / NT Linux kunye neMac OS, kwaye iyahambelana ne-USB 2.0 kunye ne-USB 1.1.
• I-USB Flash Drive inezinto zomzimba ezomeleleyo nezixineneyo ze-ABS kunye nezindlu zeMetri eziyilwe ngokujikeleza. Uyilo olujikelezayo lwe-360 ° lwenziwe ngentsimbi engenasici, kwaye icandelo elingaphakathi lenziwe ngeplastikhi ye-ABS.
• I-USB Flash Drayivu iyi-58mm × 19.5mm × 10.8mm, kwaye yenza ukuba kube lula ukutyibilika epokothweni. Ukuphela kokuqhuba kwesithupha kunesiphatho esinokuqhotyoshelwa ngokulula kwityathanga lakho lesitshixo okanye imisila yenkomo, usebenzisa ukunceda ukugcina ekulahlekelweni, nasekuthwaleni ngokulula.
• Zonke iidrive ze-usb ziye zavavanywa ngokungqongqo kwaye zafomathiwa phambi kokushiya umzi-mveliso. Kwaye sinikezela ngeenkonzo zewaranti zeenyanga ezili-12, ukuba unemibuzo nceda uthumele i-imeyile kuthi, iinkonzo zethu zabathengi ziya kukuphendula ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Okulandelayo: 64MB-64GB I-Faux Leather USB Flash Drayivu
Uyilo olumiselweyo lwe-16GB / 32GB ye-LED LOGO ye-USB Drayivu
Uyilo lwe-OEM ilogo yokukhanya eKhanya kwi-USB Drayivu
5000mAh Slim Magnetic Powerbank NgeRingi ebambe ...
I-W06 yensimbi yamagnetic 15W qi ishaja engenazingcingo
I-MQ-GS01 JoyCon yeNintendo switch
Mini amandla bank 5000mah, ipokotho powerbank, promot ...